ထိုင်းဘုရင်ရဲ့… လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှ…ာ မြန်မာအကျဉ်းသားတွေလည်း… ပါဝင်လွတ်မြောက် – ရှအေလငျး
မင်း ဆက် (၁၀) ဆက်မြောက် ထိုင်းဘုရင် မဟာ ဘာဂျီရာ လောင်ကွန်းနန်တက်ပွဲ နဲ့ အတူ အကျဉ်းသားလွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးခဲ့ရာမှ
ာ ပြစ် ဒဏ် ကျ အကျဉ်းသားတွေကို မေလ ၁၀ ရက်နေ့သောကြာနေကစတင် လွတ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
နိုင် ငံ တ ၀န်း အကျဉ်းသားပေါင်း သုံးသောင်းမှာ ငါးသောင်းအကြား လွတ်မြောက် လာနိုင်ကြောင်း ထိုင်းသတင်းတွေမှာေ၇းသားဖေါ်ပြနေတာတွေ့ ရပါတယ်။
ထိုင်း တ နိုင်ငံလုံး ဗဟိုအကျဉ်းထောင်ပေါင်း ၁၄၀ ကျော်မှာ ပြစ်မှုကြီး (မူးယစ်- လူသတ်)တွေ နဲ့ထောင်ကျနေသူ
အ ကျဉ်း သား ဦးရေဟာ ၃၂၅၂၉၈ ဦး ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အကျဉ်းသားအများဆုံး (၆) နိုင်ငံ မှာ ထိုင်းနိုင်ငံလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဘ န်ကောက်မြို့က ဘန်ခင် အကျဉ်း ထောင် ချွန်ဘူ၇ီ -စမုပရကန် စတဲ့ မြို့ တွေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့ တွေဖြစ်တဲ့
မဲေ ဆာက်-ရနောင်း-မဲဆိုင် စတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအကျဉ်းသားတွေ အများဆုံးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ယ ခု လွတ်မြောက်လာသူတွေမှာ သက်ကြီးရွယ်အို အသက်မပြည်သေးသူ လူငယ်တွေ နဲ့ကုမရ ရောဂါ (ကင်ဆာ- တီဘီ-AIDS )ရောဂါသည်တွေလည်း ပါဝင်တာတွေ့ ရပါတယ်။
ဘု ရင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မှာ ပါဝင်မယ့် မြန်မာအကျဉ်းသားတွေကို ထောင်ကနေပြီး တဆင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့ နယ် က
လူ ၀ င် မှုကြီးကြပ်ရေး စခန်း IDC ကို ပို့ ပြီးမှာဖြစ်ပြီး ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်ဒေသတွေဆီ ပြန်လွတ်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်။
Between 30,000 and 50,000 prisoners will be released and many others will see their sentences commuted in Thailand
underaroyal pardon granted by the king on Friday on occasion of his recent coronation.
ထိုငျးဘုရငျ လှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့တှငျ မွနျမာအပါအဝငျ နိုငျငံခွားသား အကဉျြးသားနှငျ့ ထိုငျးနိုငျငံသားအကဉျြးသားပေါငျး ၃၀၀၀၀ ကြျော လှတျမွောကျ
မငျး ဆကျ (၁၀) ဆကျမွောကျ ထိုငျးဘုရငျ မဟာ ဘာဂြီရာ လောငျကှနျးနနျတကျပှဲ နဲ့ အတူ အကဉျြးသားလှတျငွိမျးခှငျ့
ပေးခဲ့ ရာမှာ ပွဈဒဏျကအြကဉျြးသားတှကေို မလေ ၁၀ ရကျနသေ့ောကွာနကေစတငျ လှတျပေးနပွေီဖွဈပါတယျ။
နိုငျ ငံ တဝနျး အကဉျြးသားပေါငျး သုံးသောငျးမှာ ငါးသောငျးအကွား လှတျမွောကျ လာနိုငျကွောငျး ထိုငျးသတငျးတှမှောရေးသားဖျေါပွနတောတှေ့ ရပါတယျ။
ထိုငျးတနိုငျငံလုံး ဗဟိုအကဉျြးထောငျပေါငျး ၁၄၀ ကြျောမှာ ပွဈမှုကွီး (မူးယဈ- လူသတျ)တှေ နဲ့ထောငျကနြသေူ
အကြ ဉျးသားဦးရဟော ၃၂၅၂၉၈ ဦး ရှိနပေါတယျ။ ကမ်ဘာမှာ အကဉျြးသားအမြားဆုံး (၆) နိုငျငံ မှာ ထိုငျးနိုငျငံလညျး ပါဝငျပါတယျ။
ဘနျ ကောကျမွို့ က ဘနျခငျ အကဉျြး ထောငျ ခြှနျဘူရီ -စမုပရကနျ စတဲ့ မွို့ တှနေဲ့ထိုငျးမွနျမာနှဈနိုငျငံ နယျစပျမွို့ တှဖွေဈတဲ့
မဲဆောကျ-ရနောငျး-မဲဆိုငျ စတဲ့ အကဉျြးထောငျတှမှောမွနျမာနိုငျငံသားအကဉျြးသားတှေ အမြားဆုံးရှိနတောဖွဈပါတယျ။
ယ ခု လှ တျမွောကျလာသူတှမှော သကျကွီးရှယျအို အသကျမပွညျသေးသူ လူငယျတှေ နဲ့ကုမရ ရောဂါ (ကငျဆာ- တီဘီ-AIDS )ရောဂါသညျတှလေညျး ပါဝငျတာတှေ့ ရပါတယျ။
ဘု ရငျ့ လှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့ မှာ ပါဝငျမယျ့ မွနျမာအကဉျြးသားတှကေို ထောငျကနပွေီး တဆငျ့ သကျဆိုငျရာမွို့ နယျ က
လူဝငျမှုကွီးကွပျရေး စခနျး IDC ကို ပို့ ပွီးမှာဖွဈပွီး ထိုငျးမွနျမာ နယျစပျဒသေတှဆေီ ပွနျလှတျပေးသှားဖွဈပါတယျ။
Between 30,000 and 50,000 prisoners will be released and many others will see their sentences
commuted in Thailand underaroyal pardon granted by the king on Friday on occasion of his recent coronation.
အင်္ဂလန်မှာ… ကျောင်းတက်ဖို့ …ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့် …ကိုရီးယာမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့.. နေမင်း
သမီးလေးတွေအပေါ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်အကြောင်းပြောလာတဲ့ ချစ်သုဝေ
ဝက်အူလှည့်နဲ့ ထိုးခံလိုက်ရတဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်
ရေဘေးသင့်သူတွေအတွက် လွှတ်တော်က သိန်းရာကျော်လှူဒါန်း… ပမဏာကတော့